Video • VECTOR
Photoshop မှာ အရိပ်ထည့်ပုံ
LeaveaComment	/ Video / By Than Htun Oo
တစ်ခါတစ်ရံမှာ Photoshop လုပ်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးတွေကို အရိပ်ထည့်ချင်လာတာမျိုးလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။အဲဒီလို အခါမျိုးမှာ အလွယ်တကူ လုပ်တတ်စေဖို့ Photoshop မှာ အရိပ်ထည့်ပုံလေးကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုဖောင့် အသုံးပြုပုံလေးကို ပြောပေးထားပါတယ်။ တကယ်တော့ ပြည်ထောင်စုဖောင့် ဆိုတာ နိုင်ငံတကာက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘုံစနစ် တစ်ခုလို့ပြောရမှာဖြစ်တဲ့ ယူနီကုဒ်စနစ် (Unicode) ကို လိုက်နာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစနစ်ကို အစိုးရရုံးတွေသာမကပဲ တနိုင်ငံလုံးက User အားလုံးကလည်း စိတ်ညီလက်ညီ သုံးကြခြင်းအားဖြင့် ခေတ်နဲ့အညီ Update ဖြစ်လာနေတဲ့ Platform တွေ Applications တွေ မှာ ပိုပြီးအဆင်ပြေစေမယ့်အပြင် အခြားဘာသာစကားတွေနဲ့လည်း အပြန်အလှန် ဘာသာပြန်လို့ အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။
WordPress အတွက် အကောင်းဆုံး Sharing Plugin ၃ ခု
LeaveaComment	/ Video / By Myat Min Lu
နောက်ထပ်လေ့လာချင်သော သင်ခန်းစာများရှိပါက comment တွင်ရေးသားခဲ့နိုင်ပါသည်ခင်ဗျ။ *အထက်ဖော်ပြပါ Tutorial သည် မိမိတွေ့ကြုံရသော အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံ၍ ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်သဖြင့် သဘောထားကွဲလွဲမှု ရှိနိုင်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ! VECTOR ၏ WordPress သင်ခန်းစာများကို တက်ရောက်သင်ကြားလိုပါက အောက်ပါ Link မှတစ်ဆင့် စာရင်းပေးသွင်းတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အွန်လိုင်း သင်တန်းတက်ဖို့ စာရင်းပေးသွင်းရန် => https://goo.gl/DhUVLt Myat Min LuFounder of VECTOR Online Learning Platformhttps://vector.com.mm Facebook: @myatminluTwitter: @myatminluInstagram: @myatminluMedium: @myatminlu
ကွန်ပျူတာသုံးရင်း စက်လေးလို့ ဆိုပြီးလာလာ နားပူတတ်တဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီသင်ခန်းစာလေးကို မျှဝေလိုက်တာပါ။ ဆရာကြီးများအတွက်မဟုတ်ပါ။
URL Forwarding လုပ်ခြင်း
LeaveaComment	/ Tutorials, Video / By Myat Min Lu
မင်္ဂလာပါ ဒီ သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ Domain Forward လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ၊ Domain အသစ်ပြောင်းပြီး အဟောင်းကနေ အသစ်ကို အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲသွားတာမျိုး ပြုလုပ်ချင်သူတွေနဲ့၊ Domain ၂ ခု ၃ ခုကို ၁ တစ်ခုတည်းအဖြစ် အသုံးပြုလိုသူတွေအတွက် Freenom, Namecheap နှင့် Godaddy တို့ကိုအသုံးပြု၍ Url Forwarding လုပ်ခြင်းကို သင်ကြားပြသပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ထပ်လေ့လာချင်သော သင်ခန်းစာများရှိပါက comment တွင်ရေးသားခဲ့နိုင်ပါသည်ခင်ဗျ။ *အထက်ဖော်ပြပါ Tutorial သည် မိမိတွေ့ကြုံရသော အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံ၍ ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်သဖြင့် သဘောထားကွဲလွဲမှု ရှိနိုင်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ! VECTOR ၏ WordPress သင်ခန်းစာများကို တက်ရောက်သင်ကြားလိုပါက အောက်ပါ Link မှတစ်ဆင့် စာရင်းပေးသွင်းတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အွန်လိုင်း …
URL Forwarding လုပ်ခြင်း Read More »
Cropping tool အသုံးပြုပုံ
Pagemaker ထဲမှာ စာစီစာရိုက်လုပ်ရင်း တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ပုံလေးတွေထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ ကြုံလာတာမျိုးတွေ ၊ စိတ်ကူးပေါက်တာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အခါမျိုးမှာ လိုသလိုထည့် ပြီး လိုသလိုဖြတ်တောက်နိုင်ဖို့ ဒီသင်ခန်းစာလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
Gradient tool အသုံးပြုပုံ
LeaveaComment	/ Video, ပညာဒါန / By Than Htun Oo
အလင်းအမှောင်အရောင်အဆင်းလေးတွေကို Gradient tool သုံးပြီး ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့် စိတ်အာရုံကို တစ်မျိုးဖမ်းစားစေတတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ Gradient tool အကြောင်းလေးတွေ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
© 2009 - 2020 Vector Online Learning Platform.